Baarlamaanka Mareykanka oo isku raacay in Trump lasaaro Maxkamaddii lagu Casili lahaa.
0 Thursday December 19, 2019 - 06:31:56
Codayn xalay ka dhacday magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayay golaha Koongareeska Mareykanka oo u dhigma Baarlamaan waxay isku raaceen in Trump lasoo taago Maxkamad u gogol xaaraysa in casilaad lagu sameeyo.
0 Wednesday December 18, 2019 - 15:08:35
Markii ugu horraysay dowladda Masar ayaa qirtay in ay qeyb weyn ka tahay faragelinta melleteri ee dowladaha shisheeye ay ku qaadeen wadanka dariska la ah ee Liibiya.
0 Tuesday December 17, 2019 - 14:10:18
Trump oo Hoggaamiyaha Qadar ku cadaadiyay in uu la heshiiyo dowladda Sacuudiga.
0 Tuesday December 17, 2019 - 07:15:46
Dowladda Qadar ayaa ku dhawaaqday in natiijooyin wax ku ool ah laga gaaray wadahadallo dhanka siyaasadda ah oo ay lafurtay Boqortooyada Aala Sacuud si loosoo gaba gabeeyo khilaafka u dhaxeeya dowladaha Khaliijka.